သတင်း - အောက်ဖော်ပြပါ ဗဟုသုတများကို ဖတ်ရှုပြီးပါက ကြက်တစ်အုပ်လုံးတွင် ရတနာများ ရှိနေသည်ကို သင်သိပါလိမ့်မည်။
1. ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်သည် 40.9 ဒီဂရီနှင့် 41.9 ဒီဂရီကြားရှိပြီး ပျမ်းမျှ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မှာ 41.5 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သောကြက်များအတွက် မွေးမြူသောအခါတွင် အပူချိန်သည်လည်းကောင်းကြက်သား အိမ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မြင့်သည်။
၂။ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၆၀ မှ ၁၇၀ နှုန်း၊ ကြက်များသည် အသက်အရွယ်အရ လူကြီးများထက် ပိုများသည်။ ကျား၊မ အရ ကြက်မသည် ကြက်ထက် မြင့်သည်။
၃။ ဥဥသောကြက်မသည် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှဥ ၃၀၀ ခန့် ဥလေ့ရှိပြီး ပျမ်းမျှပေါက်နှုန်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်။
4. ထို့အပြင်၊ အစာနှင့်အသားအချိုးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 1.50-2.00:1; feed-to-egg ratio သည် ယေဘုယျအားဖြင့် 2.0-2.5:1.0 ဖြစ်သည်။
5. ကြက်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် (၁၃)နှစ်အထိ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။
6. မွေးမြူရေးကြက်များ- ယေဘူယျအားဖြင့် ရက်ပေါင်း 110 ခန့် (စက်ရုံမှ မွေးမြူခြင်း) တွင် ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ပြီး 72 ပတ်တွင် ဖယ်ရှားပြီး ဖယ်ထုတ်သည့်အခါ အလေးချိန်2ကီလိုဂရမ်ခန့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကြက်ဖ- မျက်လုံးဝိုင်း၍ အစာမြန်သည်။
ကြက်များ- ဦးခေါင်းသေးသေး၊ ဘဲဥပုံမျက်လုံး၊ အစပိုင်းနောက်ကျခြင်း၊ ပုံမှန်ကြက်များထက် အစာစားခြင်း နှေးကွေးခြင်း၊ 20.5 ရက်အကြာတွင် ကြက်များ ပိုမိုထွက်လာပြီး 21 ရက်အကြာတွင် ကြက်များ ပိုမိုထွက်လာပါသည်။
အထွတ်အထိပ် စားသုံးခြင်း- သဘာဝအလင်းရောင်အောက်တွင်၊ အထွတ်အထိပ် စားသုံးမှုသည် နေထွက်ပြီး ၂ နာရီမှ ၃ နာရီနှင့် နေမဝင်မီ ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအတွင်း ဖြစ်သည်။
ဥထွက်မှု အထွတ်အထိပ်- အလင်းစတင်ပြီး ၂ နာရီမှ ၅ နာရီအတွင်း။
အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ကြက်များထက် ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် နိမ့်သော ကြက်ကလေးများ၏ ကိုယ်အပူချိန် ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ရောက်ရန် 10 ရက်ကြာသည်။ ထို့အပြင် ကြက်များသည် အမွေးတိုပြီး ကျဲကာ အအေးဒဏ်ကို မခံနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းကြီးထွားစေရန်အတွက် အတုအပအပူထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် အားကိုးရမည်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ အသက် 1 ရက်မှ 30 အရွယ်ရှိ ကြက်ကလေးများကို သန့်ရှင်းပြီး သန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နွေးထွေးစွာ ထားရှိသင့်ပါသည်။ အသက် 30 ကျော်သော ကြက်များသည် အခြေခံအားဖြင့် အမွေးအပြည့်ရှိပြီး နွေးထွေးရန် မလိုအပ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်မားပြီး ကြီးထွားမှုမြန်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကြက်များ၏ ကိုယ်အပူချိန်သည် 40.8 မှ 41.5 ℃ ဖြစ်သောကြောင့် ပူနွေးသော ဆောင်းရာသီနှင့် အေးမြသော နွေရာသီနှင့်အတူ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မွေးမြူရပါမည်။ ထို့အပြင် ကြက်များတွင် အစာခြေလမ်းကြောင်း တိုတောင်းခြင်း၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု အားကောင်းပြီး ကြီးထွားမှု မြန်ဆန်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို လုံလောက်သော အာဟာရနှင့် အစာကြေလွယ်အောင် ကျွေးရပါမည်။ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ခုခံမှုအားနည်း။ အထူးသဖြင့် ကြက်ငယ်များသည် အန္တရာယ်ရှိသော ရောဂါပိုးမွှားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြင်ပလူများအား ကြက်လှောင်ဖိုအတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်မပြုရန် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လှောင်အိမ်များကို ပိုးသတ်ပေးရမည်၊ အမျိုးမျိုးသော ကာကွယ်ဆေးများကို ပုံမှန်ထိုးပေးရမည်။ လန့်လွယ်သောအုပ်စု။ ကြက်များသည် ရှက်တတ်ကြပြီး အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သောကြက်များသည် သိုးစုရလွယ်ကူသည်၊ အလင်းရောင်ထဲတွင် စည်ကားနေကာ ကြီးထွားဖွံဖြိုးမှုကို ပိတ်ဆို့ထားကာ ပြင်းထန်သောအကောင်များကို နင်းမိပါက မသန်မစွမ်းဖြစ်စေပြီး သေဆုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆိတ်ငြိမ်သောနေရာတွင် ကြက်မွေးမြူပါ။ ကြမ်းတမ်းသော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရုတ်တရက် ဆူညံသံများ၊ ခွေးများနှင့် ကြောင်များ ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဖမ်းမိခြင်းများသည် သိုးစုအတွင်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ စိုစွတ်မှုကိုကြောက်တယ်။ ကြက်များသည် ခြောက်သွေ့ပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြီးထွားသင့်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် စိုစွတ်နေပါက အချို့သော ရောဂါပိုးများနှင့် မှိုများသည် ကြီးထွားရန်နှင့် မျိုးပွားရန် လွယ်ကူသည်။ ကြက်အိမ်သည် စိုစွတ်နေပါက ကြက်ချေးများသည် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များထွက်ရှိစေရန် အချဉ်ဖောက်ပြီး ကြက်များကို ဖျားနာလွယ်စေသည်။
ကြက်အမွေးများကို ကြက်အမွေးနှင့် ငှက်မွေးအမွေးဟူ၍ ပိုင်းခြားထားပြီး ထင်ရှားသောအပိုင်းကို အပြင်ဘက်အမွေးဟုခေါ်ကာ အရေခွံဖုံးသောအပိုင်းကို အောက်ငှက်ဟုခေါ်သည်။ အမွေး၏ထွက်ရှိမှုသည် ကြက်၏အသက်အလေးချိန်၏ 7.6% မှ 8.6% ဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုဆောင်း၊ စီမံပြီး အသုံးချနိုင်လျှင် ခေါင်းအုံးစွပ်များ၊ ဂွမ်းစောင်များ၊ အင်္ကျီများ၊ စစ်အိပ်အိတ် စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြီးမားသော အမွေးများသည် အမွေးဝါသနာရှင်များ၊ ကြက်တောင်ရိုက်များ စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(၁) အမွေးအတောင်များ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းခြင်း။
①စုဆောင်းခြင်းတွင် ကောက်နှုတ်ခြင်း နှစ်မျိုးရှိသည်- အခြောက်ဖြီးဖြီးနှင့် အစိုဆွတ်ခြင်း။ အခြောက်ခံတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ စိုစွတ်သော ကောက်နှုတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ နေရာအများစုတွင် အသုံးပြုကြပြီး အမွေးများသည် အစိုဓာတ်များပြီး အခြောက်ခံကာ ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကြက်အမွေးများကို စုဆောင်းသည့်အခါ အမွေးအဆင်း၊ လလာလာနှင့် အမွေးကြီးများကို ခွဲခြားထားသင့်သည်၊ အထူးသဖြင့် အောက်ပိုင်းနှင့် lamella များသည် တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ အမျိုးမျိုးသော အမွေးများ၏ အရည်အသွေးနှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မတူညီသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို တွဲမထားပါနှင့်။
② အခြောက်ခံခြင်း အမွေးများကို အမိုးအကာ၊ နေသာပြီး သန့်ရှင်းသောနေရာတွင် လေအခြောက်ခံပြီး အညစ်အကြေးများ မရောနှောပါနှင့်။ အမွေးခြောက်များကို လေတိုက်၍ ညဘက်တွင် နှင်းများ စိုစွတ်မှုမဖြစ်စေရန် အချိန်မီ သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။
③ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော အမွေးအခြောက်များကို ဂိုဒေါင်ထဲတွင် သိမ်းဆည်းပြီး မကြာခဏ စစ်ဆေးပါ။ မှိုတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထူးခြားသောအနံ့ရပါက ၎င်းတို့ကို ထပ်မံအခြောက်ခံသင့်သည်။
(၂) အမွေးအမှင်များကို ပြုပြင်ခြင်း။
① လေအားရွေးချယ်မှု အစီအစဥ်များကို hair shaker ထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ၊ ဗူးအတွင်း အမွေးများပျံသွားစေရန် လေမှုတ်ကိရိယာကိုဖွင့်ကာ အမွေးအမှင်များ၊ အမွေးများ၊ မီးခိုးရောင်သဲနှင့် ခြေဖဝါးအရေခွံများကို လက်ခံပုံးထဲသို့ ကျရောက်ကာ သီးခြားစီစုဆောင်းပါ။ . အရည်အသွေးသေချာစေရန် လေတိုက်ပုံးအတွင်းရှိ လေတိုက်နှုန်းသည် ညီညာနေသင့်ပြီး ရွေးချယ်ထားသော အမွေးများကို အိတ်ကြီးများဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသင့်သည်။
②လှေ့ပြီးနောက် အမွေးအတောင်များကို ကောက်ယူပြီး ရိုးတံများနှင့် အမျိုးမျိုးသော အမွေးများကို ထပ်မံကောက်ယူကာ ပြာပါဝင်မှုနှင့် အောက်ခြေပါဝင်မှု စံနှုန်းအတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပါ။
③ ထုပ်ပိုးထားသော အမွေးများကို ၎င်းတို့၏ အရည်အသွေး အစိတ်အပိုင်းများအလိုက် ချိန်ညှိကာ စုပုံထားသောကြောင့် ကတ္တီပါ ပါဝင်မှုသည် ကုန်ချောထုတ်ကုန်၏ စံနှုန်းသို့ ရောက်ရှိစေရန်။
④ ထုပ်ပိုးထားသော အမွေးများကို စံနှုန်းများပြည့်မီစေရန် နမူနာယူ၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့ကို ဓါးမြှောင်ထဲသို့ လောင်းချပြီး ခြေချောင်းထုပ်များ၊ ရေတွက်ကာ အလေးချိန်များကို ထုတ်ယူပြီးနောက် ချုပ်လုပ်ပါသည်။ ကုန်ချောကို ရောင်းချရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
① ပစ္စည်းရွေးချယ်ရာတွင် ထူထပ်သော အမွေးအမှင်များရှိသော ကြက်အမွေးများကို ရွေးချယ်ကာ ကြက်၏ အနေအထားအရ ၎င်းတို့ကို ပိုင်းခြားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရင်သားနှင့် ဝမ်းဗိုက်ရှိ ကြက်အမွေးများသည် ကြက်အမွေးပြုလုပ်ရန် အသင့်တော်ဆုံး ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။
② အများအားဖြင့် ဘယ်ဘက်လက်မ၊ လက်ညိုးနှင့် လက်ခလယ်ကို ဖြိုဖျက်၍ ကြက်မွေးထိပ်ဖျားကို အောက်သို့ ညှစ်ရန် ဘယ်ဘက်လက်မ၊ လက်ညိုးနှင့် လက်ခလယ်ကို အသုံးပြု၍ ကြက်အမွေး၏ အပေါ်ဘက်နှင့် ညာဘက်အောက်ကို ညှစ်ရန်၊ ဖြိုဖျက်ပစ်လော့။ ကတ္တီပါချည်မျှင်များသည် ကြက်ကတ္တီပါဖြစ်သည့် ပန်းပွင့်များဖြစ်သည်။
③ အရောင်ခွဲခြားခြင်း ကြက်အဖြူရောင် ကတ္တီပါကို သီးခြားခွဲရန် ကတ္တီပါကို ဖြိုခွဲလိုက်သောအခါတွင် အခြားအရောင်များကို စုပေါင်းကာ မီးခိုးရောင် ကြက်ကတ္တီပါဟု ခေါ်ပြီး အတူတကွ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
④ ထုပ်ပိုးမှု မတူညီသောစျေးနှုန်းကြောင့် ကြက်ဖြူနှင့် မီးခိုးရောင်ကြက်သားအောက်ပိုင်းကို သီးခြားထုပ်ပိုးရပါမည်။ ကြက်သားသည် ပေါ့ပါးသော အမြှုပ်ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး သယ်ယူစရိတ် သက်သာစေရန်အတွက် ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖိထားသင့်သည်။ ကြက်သား၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရည်အသွေးသည် သဘာဝအတိုင်း ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် နူးညံ့သော လက်ကို ခံစားရန် လိုအပ်သည်။ ကြက်သားအောက်ပိုင်း ပါဝင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး သန့်စင်သော ပျော့ပျောင်းသော သန့်စင်မှုသည် 90% ထက် မနည်းစေရဘဲ ယင်းတို့အနက်မှ ပြန်လည်မွေးထုတ်ခြင်း 10% ထက် မပိုရဘဲ သိုးမွှေးအစင်းများ 2% ထက် မပိုစေရပါ။
ဟိ ကြက်သား အရသာရှိပြီး အာဟာရပြည့်ဝသည်။ ကြက်သားတွင် အာဟာရဓာတ်အများစုမှာ ပရိုတင်းနှင့် အဆီများသော်လည်း ကြက်တွင် ကယ်လ်စီယမ်၊ သံဓာတ်၊ ကာရိုတင်း၊ သီယာမင်း၊ riboflavin၊ niacin နှင့် ဗီတာမင်အမျိုးမျိုးနှင့် အမျှင်ဓာတ်များ ချို့တဲ့နေသည်။ ကြက်သားကို အဓိက အစားအစာအဖြစ် အချိန်အကြာကြီး စားသုံးပြီး အခြားအသီးအနှံများကို မစားပါက ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အစေ့အဆန်များ အလွယ်တကူ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ကြက်သားစားသုံးမှုပမာဏသည် အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအပေါ် သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုများက ယုံကြည်ကြသည်။
အာဟာရဗေဒပညာရှင်များက လူတို့သည် တစ်နေ့တာလုံး အစားအစာမျိုးစုံကို စားသောကြောင့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကြက်သားတွင် ကိုလက်စထရောပါဝင်မှု အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။ ကိုလက်စထရောသည် နှလုံးသွေးကြောနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုကို အလွန်တိုးစေပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အမျိုးသမီးများနေ့စဉ် ကြက်သားစားပါက ပိုလျှံနေသော ကိုလက်စထရောများ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် မလွဲမသွေ စုပုံလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက နှလုံးရောဂါနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းတို့ကိုလည်း တိုးပွားစေသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ။
ထို့အပြင် အချို့သောတရားမ၀င် ကုန်သည်များသည် ကြက်အစာများတွင် ဟော်မုန်းများထည့်ကာ ကြက်တွင် ဟော်မုန်းအကြွင်းအကျန်များ ဖြစ်ပေါ်ကာ လူ့ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။
ဟော်မုန်းပါရှိသော ကြက်များကို စားသုံးသော ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများသည် နို့ပြန်ရည်နှင့် အဝလွန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အရွယ်မရောက်သေးသူများလည်း အပျိုဖော်ဝင်စအချိန်ကို ဦးတည်သွားနိုင်သည်။
ကြက်သားတွင် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး ၎င်း၏အဆီတွင် မပြည့်ဝဆီများပါ၀င်သောကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ကောင်းမွန်သောပရိုတင်းအစားအစာဖြစ်သည်။ ဖျားပြီးနောက် သို့မဟုတ် မီးဖွားပြီးနောက် အထူးသဖြင့် ပိုးသားကြက်သားအတွက် ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် ကြက်သား သို့မဟုတ် ကြက်ပြုတ်ရည်ကို စားသုံးရန် ပိုသင့်လျော်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အရိုးငွေ့များပူလောင်ခြင်း၊ သရက်ရွက်ချို့တဲ့ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ metrorrhagia၊ leucorrhea၊ spermatorrhea စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။